နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့ ပရိသတ်ကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ - Cele Connections
နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့ ပရိသတ်ကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
သရုပ်ဆောင် ဆောင်းယွန်းစံကတော့ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းယွန်းစံက သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း သရုပ်ဆောင် နေဒွေးနဲ့ သံစဉ်မောင်တို့ရဲ့ ကိစ္စမှာ မဆီမဆိုင် အပြောခံနေရပြီး အထင်အမြင်လွဲခံနေရတာကြောင့် သူမဘက်က မှန်ကန်ကင်းရှင်းကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေရှိနေသေးပြီး ဒီကနေ့မှာလည်း နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဆောင်းယွန်းစံက “ဒိကိစ္စလေးတော့ ဝင်ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့နော်။ ဆောင်း like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေကို ပြောတာပါ။ ဈေးရောင်းပိုစ့်တွေ တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေမန့်ချင်မန့်မယ် စကားပြောမယ်။ ဒါဆောင်းရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယ်ချင်းတွေဈေးရောင်းရင် ဝင်မဝယ်ဘူးလား.? ဒါနောက်ဆုံးရှင်းတာ။ ကျန်တာ ထင်ချင်တာထင်တော့ .. ဟုတ်ပြီနော် ✌️” ဆိုပြီး အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းယွန်းစံကတော့ ဖြစ်လာသမျှကို ပြောခံရမယ့်ကံပါလို့ ပြောခံရတယ်လို့ သက်မှတ်ကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Saung Yoon San’s fb
နဒှေေးရဲ့ ပို့ဈတှမှော ကောနျ့ဝငျမပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားအပျေါ ထောကျပွဝဖေနျတဲ့ ပရိသတျကို အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ပွနျလညျဖွရှေငျးခဲ့တဲ့ ဆောငျးယှနျးစံ
သရုပျဆောငျ ဆောငျးယှနျးစံကတော့ လတျတလောမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခွငျးခံနရေသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆောငျးယှနျးစံက သူမရဲ့ သူငယျခငျြး သရုပျဆောငျ နဒှေေးနဲ့ သံစဉျမောငျတို့ရဲ့ ကိစ်စမှာ မဆီမဆိုငျ အပွောခံနရေပွီး အထငျအမွငျလှဲခံနရေတာကွောငျ့ သူမဘကျက မှနျကနျကငျးရှငျးကွောငျး ပရိသတျတှကေို ရှငျးပွခဲ့ပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့သော ပရိသတျတှကေတော့ သူမအပျေါ ဝဖေနျမှုတှရှေိနသေေးပွီး ဒီကနမှေ့ာလညျး နဒှေေးရဲ့ ပို့ဈတှမှော ကောနျ့ဝငျမပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ထောကျပွဝဖေနျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထိုကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီး ဆောငျးယှနျးစံက “ဒိကိစ်စလေးတော့ ဝငျရှငျးသငျ့တယျထငျလို့နျော။ ဆောငျး like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနဒှေေးနဲ့သံစဉျမောငျနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပိုဈတှကေို ပွောတာပါ။ ဈေးရောငျးပိုဈ့တှေ တခွားမသကျဆိုငျတဲ့ ပိုဈတှမေနျ့ခငျြမနျ့မယျ စကားပွောမယျ။ ဒါဆောငျးရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယျခငျြးတှဈေေးရောငျးရငျ ဝငျမဝယျဘူးလား.? ဒါနောကျဆုံးရှငျးတာ။ ကနျြတာ ထငျခငျြတာထငျတော့ .. ဟုတျပွီနျော ✌️” ဆိုပွီး အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ပွနျလညျဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။
ဆောငျးယှနျးစံကတော့ ဖွဈလာသမြှကို ပွောခံရမယျ့ကံပါလို့ ပွောခံရတယျလို့ သကျမှတျကွောငျး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောခဲ့ပွီးပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မကြာခင်ကျရောက်မယ့် အသက် (၂၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် မိန်းကလေးမဆန်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
(၁၀) တန်းကတည်းက သူငယ်ချင်းအတွက် ခွင့်စာလိမ်ရေးပေးတာတောင် ဂီတကို ရူးသွပ်စွဲလန်းနေခဲ့ကြောင်း အမှတ်တရပြောပြလာတဲ့ ရန်ရန်ချမ်း
အစ်မဖြစ်သူ ဖွေးဖွေးတို့အိမ်က အိမ်ချက်ဟင်းလျာတွေစားပြီး အရမ်းကောင်းကြောင်း ထောက်ခံပြောပြလာတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း စာရေးဆရာမ မာရင်ရင်နဲ့ အတူ နဂါးရုံဘုရားတစ်ဆူကို လှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး